MUQDISHO, Soomaaliya - Waxaa saaka oo Jimco ah magaalada Muqdisho ku geeriyooday Allah ha u naxariistee Wasiirkii Beeraha iyo Waraabka dowladda Puntland, Cabdinuur Cilmi Maxamuud [Biindhe].
Geerida Wasiirka waxaa warbaahinta u xaqiijiyay Xildhibaan Sharma'arke Garaad Saleebaan, oo kamid ah Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya.
Wasiirka ayaa u geeriyooday xanuunka Sonkorta [Diabetes], oo la jiifay Isbitaal ku yaalla magaalada Muqdisho. Mas'uuliyiinta Puntland iyo dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa ka tacsiyadeeyay geerida ku timid Marxuumka.
Inta uusan wasiirka noqon, Cabdinuur ayaa 2013-kii soo noqday Madaxweynaha Khaatumo, isagoo kaalin kasoo qaatey sidii gobollada Sool iyo Sanaag u yeelan lahaayeen maamul ka madax-banaan Somaliland iyo Puntland.
Garoowe: Xarunta laga Dalbado Baasaboor Soomaaliga oo xiran
Puntland 12.03.2018. 11:28
Go'aankaas waxaa markii hore ka biyo diiday maamulka jooga xarunta Garoowe....